BIBIDIA & Puzzles: fifohazana – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
BIBIDIA & Puzzles: fifohazana – mangalatra&Hack
ny admin | Oktobra 21, 2021
In 2038, niova tampoka ny fiantraikan'ny fisondrotry ny masoandro teto an-tany. Ny hery tsy mitsaha-mitombo dia niteraka triatra lalina teo amin'ny hoditry ny tany mankany amin'ny fotony, manambara zava-miafina izay tsy natao ho tonga amin'ny hazavan'ny andro…
Nanomboka nirotsaka tamin'ny tany ny monsters. Horohoro, TAHOTRA, ary nandrakotra ny planeta manontolo ny aloky ny fahafatesana. Niara-nientana ny firenena rehetra ary nanao fanafihana nifanandrina tamin'ity fandrahonana vaovao ity, nefa toa tsy afa-nanoatra nanohitra ny onjam-pandrefesana tsy misy fiafarany ny olombelona.
Amin'ny ora faran'ny olombelona, misy firohondrohona lalina sy mahery avy any ivelany, manafintohina na lehilahy na biby goavam-be. Tena nifoha tokoa ve ilay bibidia angano?
Mistery miandry anao ho sarona!
tetika + MATCH-3
– Mamaha piozila handresena monsters.
– Miomàna amin'ny paikady sy tetika.
– Fifangaroan'ny wargame taktika sy lalao piozila mahazatra.
– Amboary ny toby miaramilanao manokana ary makà mahery fo.
– Ampio biby goavam-be hanatsara ny herinao.
– Manangàna tafika matanjaka ary miadia miaraka amin'ny bibinao.
– Makà mahery fo ary manangana ekipa sangany ho an'ny fikarohana.
– Ny mahery fo dia fananana sarobidy hanampy anao amin'ny ady ho avy.
– Miadia miaraka amin'ireo mpiara-dia aminao. Miresaka amin'ny namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao!
– Ny fanampian'ny Alliances dia afaka manafaingana ny fanorenanao fototra.
– Manangona mpiara-dia handresy fahavalo.
– Rembin'ny matanjaka ny fiarahana malemy. Hiady ve ianao sa hitolo-batana?
Araho izahay ao amin'ny Facebook raha te hanara-maso ny vaovao farany sy ny hetsika! ny https://www.facebook.com/BeastsPuzzles
BIBIDIA & Puzzles is a free-to-play mobile game with in-app purchases. Araka ny fepetra fampiasana sy ny politika momba ny fiainana manokana, ity fampiharana ity dia tsy natao ho an'ny mpampiasa latsaky ny taona 12. Ilaina ny fitaovana misy fidirana aterineto.
Mila fanampiana ve ianao? Manolotra fanampiana amin'ny olana rehetra mifandraika amin'ny lalao izahay! Aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny tranoben'ny Customer Center in-game na mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny:
ady: ny https://discord.gg/WERBgnuXJS
politika Fiarovana fiainan'olona: Sokajy://static-sites.allstarunion.com/privacy.html
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: fifohazana, BIBIDIA, CheatsHack, Puzzles
← Nosy ala : Lalao Relaxing Cheats&Hack Traffic Cop 3D – mangalatra&Hack →
Lineage2M – mangalatra&Hack
Figure Fantasy – mangalatra&Hack
Lalao Rocket League Sideswipe – mangalatra&Hack
Wildshade: hazakazaka soavaly fantasy – mangalatra&Hack
Bubble Breaker - Tanjona ny handresy – mangalatra&Hack
Lalao Poppy aterineto : Lalao Huggy Wuggy Cheats&Hack
Mahantra Menarana: Afaka manampy azy Cheats&Hack
Circle Relax: Puzzles isan'andro Art Puzzle&Hack
Poppy Playtime Huggy Wuggy – mangalatra&Hack
Fonja iray Deck – mangalatra&Hack